माइतीघरमा नेकपाका सांसदको प्रदर्शन : हामी यहाँ छौं ! - Charchit Entertainment!
Home bjob माइतीघरमा नेकपाका सांसदको प्रदर्शन : हामी यहाँ छौं !
१० पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले माइतीघरबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
भुसालले भने, अदालतको सुनुवाई आज सुरु हुन्छ, त्यहाँ पनि हामी सांसदहरु पुग्छौं । र, यसरी बहुमत सांसदहरु, बहुमत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु, हामी संसदको पुनस्थापनाको पक्षमा छौं र हामी आधिकारिक नेकपा हौं भन्ने आज हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’